musha NYAYA DZEEEOPEAN Mason Mount Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Mason Mount Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi naLB
LB inopa Nyaya Yakazara yeBhola Genius ine zita rekuti “Mount"Yedu Mason Mount Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubva paudiki hwake kusvika zvino.
Mason Gomo reChikoro Chemwana- Iyo Ongororo Kusvikira. Credits kuna Twitter uye IG.
Ongororo yacho inosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, nhoroondo yemhuri, nyaya yehupenyu pamberi pemukurumbira, nzira yekurumbira nyaya, kusimuka kune mukurumbira nyaya, hukama, hupenyu hwepamoyo uye mararamiro nezvimwe.
Ehe, munhu wese anoziva kuti akakurira achipinda muzivo uye hunyanzvi hwe ngano Frank Lampard. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga nezveMason Mount's biography iyo inonakidza kwazvo. Iye zvino pasina kumbopfuurira mberi, ngatitangei.
Mason Mount Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Upenyu Hwekutanga uye Mhuri
Kutanga kuenda, mazita ake akazara ndiMason Tony Gomo. Mount akaberekwa pazuva regumi raJanuary 10 kuna baba vake, Tony Mount naamai, muPortsmouth, United Kingdom. Tete vake vanoita kunge vari mukutanga makumi matanhatu emakore ukuwo mai vake vachiita kunge vava kuda kusvitsa makore makumi mana panguva yekunyora.
Mason Gomo Vabereki. Zvikwereti ku IG uye Twitter
Mhuri yekwaMason Mount vane mabviro kubva kuPortsmouth, guta rechiteshi muEngland rinozivikanwa seguta rechipiri rine vanhu vazhinji muUK uye vanozivikanwa kuve nechero chibereko chikuru chinobata chiteshi munyika. Vanhu vayo vanozivikanwa nekuomarara kwavo uye vane moyo wakasununguka nzira yekuda hupenyu.
Mason Gomo Mhuri Dzinobva. Chikwereti kuWoW247 uye World Atlas.
Kufunga kubva paruzivo runowanikwa kubva kuruzhinji rwemunhu, zvinoita seGomo handiyo yega mwana wechirume kuvabereki vake. Akakurira pamwe chete nasisi vake mukuru uyo ​​parizvino akaroora uye anogara nemurume wake kuAustralia, nzvimbo yekufarira yezororo kuvabereki veMount.
Gomo rakabva kumhuri inofarira bhora ine yepakati mhuri yemhuri. Baba vake, pane kuita basa rekuvaka ngarava, vakatora basa risingaite-bhora rebhora uye gare gare, basa rekudzidzisa iro rakapa mhuri yake chikafu. Gomo Snr kana Tony (zita rake chairo) aimbova mutambi asiri ligi uye akazova maneja weHavant Town neNewport.
Mason Mount Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Dzidzo neKubata Buildup
Kukura, Mason Mount vabereki vakasimbirira kuti anowana dzidzo kunyangwe isiri yake kudzima rudo. Zvakanga zvakamuomera kuna baba vake Tony (Mount Snr) kubata nekuzorora kubva pabasa rake risinganyanyoomesa moyo. Akapika kuti acharamba achirarama zviroto zvake kuburikidza nemwanakomana wake Gomo.
Pakutanga, Gomo rinofara rinofananidzirwa pazasi rakazviwana iro rakanaka kwazvo pakusatadza kudzidza kwake kudzidziswa nhabvu. Wese munhu aimuziva kare ikako aigona kuona kuti aigara uye achifema bhora.
Nekufamba kwenguva, kuda kugashira bhora dzidzo kwakaramba kuchikura mupfungwa dzeGomo. Kunyange zviitiko zvese dzimwe nguva zvaigona kuzombomira, kutamba nhabvu kwaikunda. Gomo aikurisa hunyanzvi hwake mangwanani ega ega, masikati nemanheru kuminda yenhabvu yePortsmouth.
Mason Mount Dzidzo uye Basa Rekuvaka. Chikwereti ku Twitter.
Vese vemhuri yake vaiziva kuti aive akatongerwa zvinhu zvikuru sezvo dzimwe nguva vaimutarisa vachimupa zano kuti aende kumiedzo.
Hazvina kutora nguva Mason Mount asati abatanidza kushevedza kuti apinde mumiedzo paBoarhunt FC yake, guta rake reguta. Panguva ino, kudada kwababa vake vaaida vaisaziva miganho.
Mason Mount Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Basa Rokutanga Upenyu
Paaitamba pasi-6 nhabvu semakore mana-gore yekirabhu yake yemuno, kugona kweMason kwakabata mwoyo yemakirabhu maviri epamusoro anoti Pompey neChelsea FC. Kunyangwe hazvo Chelsea yaive yekutanga kumuona pazera ramakore matanhatu, apo airidza Boarhunt, yake yepanzvimbo academy.
Kuda kwaMount nhabvu kwakamuona achipfuura muChelsea academy miedzo uye achitora zvakanzi nababa vake "njodzi”Kubatana naChelsea aine makore matanhatu, mu2005. Nei njodzi? !!. Imhaka yekuti baba vake vakamunyevera nezvekushaiwa kwavo basa kweChelsea FC kupedzisa vatambi vechidiki vedzidzo yavo kuchikwata chavo chepamusoro. Iyi ndiyo yaive nguva yekutamba nayo Roman Abramovich uyo aifarira kutenga mapfuti mahombe.
"Akayambira achiri mudiki kuti John Terry ndiye ega mutambi akambopedza chirongwa chechidiki cheChelsea kupinda muchikwata chekutanga mumakore apfuura. Mason akapindura aine chivimbo kuti achazotevera. ”
Mason Mount baba vakamboti.
Kunyangwe akatarisana nedzvinyiriro yekutamba yechikoro, Mount akaramba achizvipira kuzvidzidza kwake apo aipinda Purbrook Park Chikoro muWaterlooville iyo yaive 8 mamaira kuchamhembe kwePortsmouth.
Senzira yekuwana iyo isingawanzo kufemerwa kuigadzira kuchikwata chekutanga cheChelsea, Mount mudiki akatora mukana wese waaive nawo wekusangana nenyaya John Terry.
Mason Mount Pakuvamba Yekuchengeta Memories- Kusangana naAshley Cole naJohn Terry
Mount haana kungogumira ipapo, sezvaakakura, anotorawo zvidzidzo zvinokurudzira kubva David Luiz, mumwe mutambi aine kamwe-kamwe-up pfungwa iye akafungawo nezve chidhori chake. Zvishoma aisaziva uye iye uye Luiz vese vaviri vanozoita shamwari navo rimwe zuva.
Mason Mount inosangana nechikwata-chake-David Luiz
Mason Mount Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Mugwagwa Mukurumbira Nhau
Mount haana kumbokanganwa chikamu chedzidzo mudzidzo muChelsea. Kunyangwe kuenda kuchikoro hakuna kumuita kuti atadze kutarisa sezvo aigara achiitira mabasa epamba kazhinji mu8km yake yakareba rwendo rwekudzidzira.
Sezvo Mason Mount yairamba ichikura, akazviona achigadzikana muhupenyu neiyo academy ichiita kufambira mberi kuburikidza nevezera mazera semumwe wevatambi vakanaka.
Aive mumwe wevatsigiri vechidiki veChelsea academy avo vakaita misoro 2015 kuenda ku2017 pavakasimudza iyo FA Youth Cup.
Mason Mount Mugwagwa kune Mukurumbira Nyaya
Mwaka iwo mumwe chete, Mason Mount yakaendawo zvakare kuhwina UEFA Youth League uye imwe mukombe wevechidiki weOD mwaka unotevera.
Kubudirira kwake kwechidiki basa kwakamuwanisa mukana wekudaidzira kuEngland under-19 squad. Mount akaenderera mberi kubatsira vake veU19 vatambi mukukunda muchena EFA European Championship mu2017, achiwana mutambi wegoridhe uye timu yemubairo wetsiva.
Mason Mount- Kutanga England Kukudzwa.Credit to UEFA
Iyo Nguva Yekutya:
Mason Mount akazova pasi pekumanikidzwa kuti agamuchire iyo yakaoma nyaya iyo yakambouya senyevero kubva kuna baba vake. Kana iwe waigona kuyeuka, aifanirwa kuziva kuti John Terry ndiye chete mukomana wekudzidzira kuti akabudirira kuzviita muchikwata chekutanga mumakore ekupedzisira e20.
Zvinosuruvarisa, Mason Mount akarambidzwa kubatanidzwa -chikwata chekutanga izvo zvakaita kuti iye asarudze kutora chikwereti sarudzo sezvaiitwa nevamwe vazhinji veChelsea FC loanees.
Mason Mount Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Kumuka Mukurumbira Nhau
Gomo akabatana neDutch Eredivisie kirabhu Vitesse pa24 Chikunguru 2017 kuburikidza nechikwereti chakareba mwaka. Zvakare kudiwa nekirabhu kwaive chivimbo chakawedzera kune murume wechidiki wechiRungu uyo ​​akangofanana Jadon Sancho akanzwa kuda kuvhenekwa patsva, tsika yekudzidzira uye maitiro mune imwe nyika.
Mason Gomo Kukwira Kumukurumbira neVitesse. Kiredhiti ESPN
Mason Mount yakabva yaita fungidziro nekirabhu semutambi wekutanga-timu. Mugore rake rekutanga, akahwina Vitesse Player ye2017-18 mwaka. Kuhwina mubairo uyu kwakakwezva Derby aimbove maneja neChelsea legend Frank Lampard uyo aive panguva iyoyo ari pachinangwa chekubira vechidiki veChelsea kuDerby.
Nepo mamwe makirabhu epamusoro eakunda mukirabhu akaita seAjax, PSV Eindhoven airatidza kufarira, Mount akafunga kupa Derby siginecha yekutenda kumuridzi wake, Frank Lampard. Akaburitsa nguva yake nemaRams uye anga ari mutambi mukubatsira kirabhu kuhwina mutambo wekusimudzira mumakwikwi. Lampard akamudzidzisa pajira raakatora mukati menguva yekubwinya kwake neChelsea. Munguva iyi, Gomo rakava mudiwa wake waakafarira kwazvo.
Mason Mount- Makwikwi Mudiwa mudiwa waanofarira
Mason Mount akaona Lampard achienda kuChelsea semukana wakanakisa wekudzokera kuboka rake revabereki uye kuratidza kuti aizozviita kuchikwata chekutanga. Nzira chete yekubvumikisa iyo yaive yekuve neinofadza 2019 pre-mwaka. Kuratidzwa kweMount kunonakidza panguva ye2019 preseason kwakaita kuti vateveri veChelsea vatende chitsva Frank Lampard zvechokwadi yasvika paRwizi. Parizvino sepanguva yekunyora, Mount arikuita zvinoenderana nezvaaitarisira mukugona kwake kurava zvibodzwa zvikuru uye kuita kuti vatambi vepamusoro kubva mumakirabhu makuru vafugame nemabvi ake.
Mason Gomo Kukwira Kumukurumbira Nhau
Mason Mount ane pasina mubvunzo akaverengera nyika kuti iye anotevera akanaka akavimbisa echirungu chake chepakati-munda chizvarwa shure Frank Lampard. Vamwe vose, sezvavanotaura, ikozvino nhoroondo.
Mason Mount Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Ukama Hupenyu
Nekusimuka kwake kuve mukurumbira, mubvunzo pamuromo wechero weChelsea wave; Ndiani musikana weMason Mountain?. Hapana chinoramba chokwadi chekuti chimiro chake chakanaka chinowedzeredzwa pamwe nemhando yake yekutamba hazviite kuti ave mudhanzi kune vateveri vechikadzi.
Nekudaro, kumashure kweanobudirira nhabvu, kune goridhe inoshamisa muWanaka mumunhu akanaka weChloe Wealleans-Watts akafananidzirwa pazasi nemukomana wake.
Mason Gomo uye Musikana-Chloe Wealleans-Watts. Chikwereti kuna IG
Kufunga kubva kune yavo yakawanda positi pane yemagariro ezve media, zvinoita sekuti vese vadikani vanofarira solid hukama hunovakwa pane hushamwari. Rudo rwakagovaniswa pakati peGomo nemusikana wake Chloe Wealleans-Watts anotiza kuongororwa kweziso reruzhinji nekuda kwekuti hupenyu hwake hwedrama-yemahara. Iyo chokwadi yekuti vese vari vaviri vakadanana kwechinguva inosiya pasina mubvunzo kuti muchato unogona kunge uri unotevera danho.
Mason Mount Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Upenyu hwehupenyu
Kuziva Mason Mount Hupenyu hwega hwaizokubatsira iwe kuti uwane mufananidzo uzere wemunhu wake.
Mason Gomo inoda zvinhu zviviri; kutanga, kuve nemutoro uye chechipiri, kubata nguva yake. Ane nyika yemukati yekuzvimiririra iyo inoita kuti akwanise kufambira mberi kwakakosha muhupenyu hwake hwega uye hwehunyanzvi. Gomo rine ichi chikuru kuzvitenda uye kugona kuita hurongwa hwakasimba uye hwakajeka hwehupenyu hwake.
Mason Mount Gomo Hupenyu Hwechokwadi. Kiredhiti ku IG uye Twitter
Kusiyana nevazhinji vechidiki vanofamba nhabvu, Mount haatendi kuvanza chimiro chake cheukama sezvo akavhurika nezvenyika achiziva kuti musikana wake ndiani uye nevabereki vake. Akadzidza kubva mukukanganisa kwevamwe vechidiki vechidiki vebhola uye anogara akagadzirira kuburitsa hunyanzvi hwake pazvinenge zvichdiikanwa.
Mason Mount Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Upenyu hweMhuri
Mason Mount anoratidzira vabereki vake vakanaka pamwe nevanhu vanoshanda nesimba muguta rake rePortsmouth, England. Nhasi, amai vake, baba, uye hanzvadzi vese varipo vanokohwa zvikwanisiro zvekuva neiyo moyo yakaoma uye isina-kusiya-up pfungwa yakadzikwa maari.
Baba vaMason Tony AKA Mount Snr vanotenda mwana wavo Portsmouth mamiriro uye kukura kwavakaita kwakamupa muganho mune yake yepakutanga basa kubva pakutanga chaipo pebasa rake.
Mason Gomo naBaba vake
"Iwe haugone kufuratira hutsinye hwePortsmouth maari, zvakadaro!" Ndinofanira kutaura kuti Mason anopenga Pompey fanika, mhuri yese iri ”.
akadaro Tony Gomo baba vake.
Nezve Mason Mount Amai: Kusiyana nemurume wake, mai vaMason Mount vakaita sarudzo yekuziva kuti vasatsvage ruzhinji. Ano pamwe muridzi wemba asingazviise zvakanyanya mubhora, achisarudza hupenyu hwakavanzika uye hwakaderera-hwakakosha.
Mason Gomo naamai vake
Mason Mount Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - LifeStyle
Ehe, kubudirira kwake mune zvemari kunosungirwa zvakananga kune kwake kuita seanoridza nhabvu. Sezvenguva yekunyora, Mason Mount haibvumidzwe kurarama hupenyu hwepamusoro shuwa kupedzera senge kupenga, kutenga mota dzekunze kana kuchinja mararamiro ake.
Mason Mount UpenyuStyle Chokwadi. Kiredhiti The Telegraph
Mason Mount mibairo iyo yawedzera kubva mushure mekuita kwake 2019 chibvumirano haichinji kuve mararamiro akanaka. Nekudaro, ane nzira yekutora zvese zvaanoda mukati, kunge chando chake chekushambidza ice.
Mason Gomo LifeStyle
Mason Mount Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Untold Facts
Shamwari Yake Yakanakisisa: Shamwari huya uende. Asi ipapo kune izvo hushamwari hunomira chiyedzo chenguva. Muenzaniso wakanaka kwazvo unopfuura makore 13 eushamwari akagoverwa pakati peMason Mount uye Declan Rice.
Mason Gomo Untold Chokwadi- Rake Hushamwari Hurefu.
Sezvacherechedzwa pamusoro, vese vakabudirira vatambi venhabvu uye vane zvakawanda zvakafanana kubva pamazuva avo ekubereka. Ivo pamwe nevasikana vavo vanopedzera zhizha zhizha, chiratidzo kuratidza iwo simba rehushamwari hwavo.
Mason Mount naDeclan Mupunga- Iyo Shamwari Nhau
Maitiro ari kuita zvinhu, ndiani anoziva, pamwe fungidziro ingangovaunze kune imwechete kirabhu uye timu yenyika rimwe zuva.
Mason Mount Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi - Video Summary
Ndapota ona pasi apa, yevhidhiyo yeVideo Yedu yeIndaneti yemufananidzo uyu. Nomutsa Shanyira, Bhura kwatiri Youtube Channel uye chengetera Bell Icon yeZvenziso.
CHOKWADI CHINOGONA: Tinokutendai nekuverenga yedu Mason Mount Childhood Nhau pamwe neS Untold Biography Chokwadi. At LifeBogger, isu tinoedza kururamisira uye kusaruramisira. Kana ukawana chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka, tapota shandisa nesu nekupindura pasi apa. Tichagara tichikoshesa uye tichiremekedza pfungwa dzako.
Jordan Pickford Utano Nhau Plus Untold Biography Facts
Danny Rose Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts